FARATSIHO RENIVOHITRA : Miverina mantsaka rano eny an-dohasaha sy vovo ny mponina
Misedra olana indray ny Distrikan’i Faratsiho, amin’izao fotoana. Tato anatin’ny iray volana mantsy dia nijaly famatsian-drano ity renivohitry ny Distrika ity ary lasa miverina amin’ny fantsakana eny an-doharano ny mponina amin’izao fotoana ankoatra ny fampiasana lava-drano. 11 janvier 2017
Nanomboka teo amin’ny tapatapaky ny volana desambra teo no nitranga ity olana ity ary nisy ny fanambaràna amin’ny hanavaozana izany nanomboka teo saingy izao niafara tamin’ny fahatapaha tanteraka izao. Tamin’izany dia efa nambara ampahibemaso hatramin’ny mpandraharaha hanao ny fanatsarana saingy hatramin’izao dia tsy nisy asa nanomboka ka tafakatra 300 Ariary ny vidin’ny rano amin’ny bidao 20 litatra any an-toerana.
Niala andraikitra tanteraka ny tompon’andraikitry ny Kaominina any an-toerana momba ity resaka rano ity satria efa nisy ny olona hafa niandraikitra izany fa tsy izy ireo intsony ka samy miandry ny rehetra.
Etsy andaniny dia an-dalana ho tapaka tanteraka ihany koa ny lalam-pirenena faha-43 mampitohy an’i Sambaina-Faratsiho raha mitohy ny orana satria efa
manomboka ho potika indray izany amin’izao fotoana satria efa tsy tonga any an-toerana intsony ny fiara mpitatitra ankehitriny fa ireny fiara goavam-be mpitatitra entana ireny sisa no tonga any fa eo Ambatondradama no miato ny mpitatitra ary dia an-tongotra 25Km eo ho eo no ataon’ny olona ho any Faratsiho.
Efa nisy ny fampanantenana amin’ny hanamboarana ity lalana ity ho tara tamin’ny alalan’ny fiaraha-miasa tamin’ny BAD, izay nambara fa ny tapaky ny desambra lasa teo no hanombohan’ny asa saingy mbola tsy niainga izany na dia nisy tokoa aza ireo orinasa mba efa nikitika izany ka nahaveolom-bolo ny mponina tany an-toerana fa hatao tokoa ny lalana. Mbola nanamafy izany ny Filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tany an-toerana saingy hatramin’izao dia ny teo ihany no teo, ka asa na hiandrasana ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra indray ve vao hatao izany sa akory ?
Ny vokan’izany rehetra izany dia midina dia midina ny vidim-bokatra toy ny ovy any an-toerana ary midangana dia midangana indray ny entana ilain’ny mponina an-
davanandro vokatry ny haratsian’ny lalana io ihany izany.